China Cat Ingxowa ephathekayo Pet ubhaka Dog Cat enkulu Space Capsule Ukuhamba Cat Bag Carry Schoolbag mveliso kunye nabenzi | UMiaSein
Ikati ibhegi ephathekayo Pet ubhaka Inja Ikati enkulu yeNdawo yeCapsule Ukuhamba kweCat Bag Carry Schoolbag
Igama lemveliso: Ikati ibhegi ephathekayo Pet ubhaka Inja Ikati enkulu yeNdawo yeCapsule Ukuhamba kweCat Bag Carry Schoolbag
Inkcazo: Uyilo lwendawo enkulu-ntathu, olulungele iikati ezinkulu kunye nezinja. Iwindow enkulu yekrini yangaphambili + yomngxunya wokungenisa umoya phezulu inika izilwanyana zasekhaya amava ahlaziyayo ehlotyeni. Uyilo olusebenzayo olusebenzayo, ukugcina indawo kunye nokuhamba ngokulula. Uyilo anti-ukubaleka kabini, anti-lokuvula uziphu + bopha ibambelele. Uyilo lohlengahlengiso olunemikhombandlela emininzi lwenza ukuba lulungele kwaye luzinze ngasemva, kwaye umtya ongaphezulu wegxalaba unokulungiswa, okwenza kube lula ukuwuthwala. Uyilo lwendalo iphela kumaxesha amane onyaka, iindlela ezimbini kunye nokusetyenziswa okuninzi kweshutter roller. Amanqaku oxinzelelo amahlanu, amanqaku oxinzelelo alinganayo esinqeni, egxalabeni, esifubeni, ngasemva kunye neempundu, ukunciphisa uxinzelelo lokuthwala. Iigobolondo zeplastiki ezingabonakaliyo, nceda ubumnyama, ukukhanya kwangoko, vumela iikati zijonge umhlaba kwaye zive zikhuselekile. Indawo enkulu ivumela izilwanyana ukuba zijike kwaye zikhululeke.
Indlela yokufaka: ukulungelelanisa intloko ye-zipper yecala elinye elibonakalayo kunye nekhava eliphakathi kwaye uyikhuphe. Emva kokutsala icala elinye, faka elinye icala ngendlela efanayo. Beka umqamelo, okanye ubeke ilweyile.
Uhlobo: Ipinki, ngwevu, mthubi
Ubukhulu (nge-cm): 36 * 36 * 40cm
Isixhobo: Inayiloni EVA
Egqithileyo Iingubo zePuppy zeNja yabasetyhini uTeddy Bichon Pomeranian Schnauzer Encinci eQinisekayo yePetini enemilenze emine kunye nengubo yasebusika
Okulandelayo: Ukutya okuThuthuzelayo kweyeza amayeza okuTya isiXhobo sokuThintela amayeza kwiNja kunye neekati kunokuThengiswa ngeeCwecwe zeCalcium eziXhasiweyo
Pet Hair uKnot Kama Cat Kama Inja Big Row Kama Kama St ...
Pet Bowtie Bell Pet Ubucwebe Ukusonga Pet intambo ...